Ikhaya elithokomele eduze kwedolobha elisogwini laseCamden, eMaine! - I-Airbnb
Ikhaya elithokomele eduze kwedolobha elisogwini laseCamden, eMaine!
Hope, Maine, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ed & Kathy
U-Ed & Kathy Ungumbungazi ovelele
Leli khaya lisendaweni yezwe eNtabeni iHatchet eHope eduze nogu oluhle lwaseMaine futhi cishe amamayela ayi-8 ukusuka eCamden. Cishe imayela ukusuka ekhaya, yiHobbs Pond (amamayela angu-2 ubude!) enokufinyelela komphakathi ukubhukuda, ukuhamba ngesikebhe kanye nokuhamba nge-kayaking. Izindlela zokuhamba izintaba zisizungezile, futhi! I-Beaver Lodge, indawo eyintandokazi yemishado neminye imicimbi yomndeni, nayo iseduze.
Jabulela ikhishi langasese, indawo yokudlela, indawo yokuhlala, indawo yokuhlala yangaphandle kanye negumbi lokugezela elinazo zonke izinto ezibalulekile. Kukhona ikamelo lokulala elilodwa eline-sunroom elibheka phezu kwezindawo zasengadini. I-arbor yamagilebhisi iyindawo enhle yokuhlala futhi uhlale upholile ngosuku olushisayo lwasehlobo.
Ithemba idolobhana elincane, elinokuthula ezintabeni eziseduze namachibi, kodwa amakhilomitha angu-8 ukusuka olwandle! Izindawo zezivakashi zaseCamden, Rockport naseRockland ziseduze. I-Acadia National Park icishe ibe yimizuzu engama-90 ukushayela!
Ibungazwe ngu-Ed & Kathy
Siseduze, futhi sihlala sikhona ukuze siphendule imibuzo nosizo njengoba kudingeka.
UEd & Kathy Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Hope namaphethelo